२१ हजार मत ल्याएर निर्वाचित हुने सांसदले दिए राजिनामा - Janakpur Today
२१ हजार मत ल्याएर निर्वाचित हुने सांसदले दिए राजिनामा
जनकपुरधाम, साउन २९ गते । प्रत्यक्ष चुनाव लडेर जितेका एक जना प्रतिनिधीसभाका सांसदले आफ्नो पदबाट राजिनामा दिएका छन् । सप्तरी प्रतिनिधीसभा क्षेत्र १ बाट निर्वाचित डा. सूर्यनारायण यादवले सांसद पदबाट राजिनामा दिएका छन् ।
तत्कालिन संघीय समाजवादी फोरम नेपाल (अहिलेको समाजवादी पार्टी) बाट उनी निर्वाचित भएका थिए । २१ हजार ७ सय १२ मत ल्याएर विजयी भएका सांसद डा. यादवले आफ्नो स्वास्थ्य अवस्था ठीक नरहेको भन्दै प्रतिनिधीसभाका सभामुख कृष्णबहादुर महरा समक्ष राजिनामा बुझाएका छन् । यद्यपी उनको राजिनामा स्वीकृत भएको छैन् ।
समाजवादी पार्टीका प्रमुख सचेतक उमाशंकर अरगरियाले राजिनामा फिर्ता लिन आग्रह गरेको बताएका छन् । नेपालकै इतिहासमा जनताद्वारा निर्वाचित जनप्रतिनिधीले राजिनामा दिएको यो पहिलो घट्ना हो । हुन त डा. यादवले ६ महिना अगाडि पनि राजिनामा दिने कुरा गरेका थिए । तर त्यस बेला पार्टीका नेताहरुले तत्काल राजिनामा नदिन सुझाव दिएपछि उनी थामिएका थिए । उनले सोमबार एक्कासी राजिनामा पत्र बुझाएका हुन् ।
सप्तरीको तिरहुत गाउँपालिका वडा नम्बर ५ पुख्र्याैली घर भएका डा. यादव एकाएक टिकट पाएर चुनाव लडेका थिए । दुई दशक यता चिकित्सक पेशामा लागेका उनले जनकपुरधाममा पनि घर बनाएका छन् । उनको जनकपुरधाममा नीजि क्लिनिक छ । ल्याब, एक्सरे, औषधिसहितका सेवा उनले क्लिनिकमै दिएका छन् ।
सांसद बनेपनि संसदतिर त्यत्ति नजाने सांसद डा. यादव पछिल्लो समयमा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र समेत जान छाड्ेका थिए । प्रख्यात बाल चिकित्सको रुपमा परिचित उनले चुनावको समयमा आफू जिते बालबालिकाहरुको उपचार गर्ने अस्पताल खोल्ने उद्घोष समेत गरेका थिए । उनले राजिनामा दिएपछि राजनीतिक बृत्तमा हलचल नै पैदा भएको छ । उनले दिएको राजिनामा फिर्ता नलिए सरकारले घोषणा गरेको आगामी मंसीर १४ गतेको उप–निर्वाचनका दिन यो क्षेत्रमा पनि प्रतिनिधीसभाको लागि निर्वाचन हुन्छ ।
यद्यपी पार्टीले उनले राजिनामा फिर्ता लिने विश्वास व्यक्त गरेको छ । डा. यादवको राजिनामापछि स्थानीय कार्यकर्ताहरुमा असन्तुष्टि देखिएको छ भने नेतृत्व वर्गले राजिनामा फिर्ता लिने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । डा. यादवले राजिनामा फिर्ता नलिए प्रतिनिधीसभामा समाजवादी पार्टीको एउटा सिट घट्नेछ ।
जनकपुर टुडे २०७६ साउन २९ गते-PDF